स्वास्थ्य-जीवनशैली Archives - नेपाली खोज
एजेन्सी । हाम्रो समाजमा परिवर्तन भइरहेको छ । मानिसहरूले सबै प्रकारका बिषयमा खुला रूपमा कुरा गर्न थालेका छन् । तर शा’री’रिक सु’ख’भो’ग स’म्बन्धि कुरा अझै पनि वर्जित मानिन्छ र यस सम्बन्धि खुलेर कुरा गरिदैन । शा’री’रिक सु’ख’भो’ग त्यस्तै यो एक विषय हो, जुन सम्बन्धि कुरा गर्न मानिसहरू सहजै महसुस गर्दैनन्। यदि तपाईलाई लाग्छ शा’री’रिक सु’ख’भो’ग […]
एजेन्सी । मेथीदानामा अत्यधिक पौष्टिक तत्व पाइन्छन् । यसलाई राती भिजाएर बिहान खाली पेटमा मज्जाले चपाएर खाँदा र यसको पानी पनि पिउँदा विभिन्न स्वास्थ्य समस्यालाई फाइदा पुर्याउने गर्दछ । के हुन् मेथी दानाका फाइदा ? भारतको उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयका स्वस्थ वृत्त विभागका एचओडी डा. अवधेश मिश्राका अनुसार मेथीले भोक बढाउँछ र यसको नियमित सेवनले पित्त, […]
रातमा बारम्बार निन्द्राबाट बिउँझने मानिसहरुलाई यस्तो ड’रलाग्दो संकेत ?
एक अध्ययनका अनुसार रातमा बारम्बार बिउँझिने महिलाहरुको कम उमेरमा मृत्यु हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । ८ हजार पुरुष र महिलाहरूमाथि गरिएको एक अनुसन्धानले उक्त तथ्य पत्ता लगाएको हो । अनुसन्धानकर्ताका अनुसार रातिमा बारम्बार निन्द्रा खुल्नुका विभिन्न कारणहरु हुन सक्छन् । यो मस्तिष्कको एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो । हात गोडामा अचानक पीडा हुनु, दुख्नु, कुनै पनि […]
मेरो नाम हना हो र म ह स्त मै-थुन गर्छु । तपाईं गर्नुहुन्छ ? धेरै होइन । यद्यपि महिला ह स्त मै-थुनका सम्बन्धमा उति धेरै चर्चा हुँदैन । के उनीहरु खुलेर कुरा गर्छन् ? म २५ वर्षकी भएँ । मलाई याद छ कि पुरुषहरु विद्यालयमा ह स्त मै-थुनबारे खुलेर कुरा गर्थे । तर, केटीहरु ? […]
काठमाडौँ । हिजोआज धेरै जसो घरको भान्छामा पाक्ने गर्छ भात । त्यसैले धेरैलाई भातको माडका बारेमा थाहा नै होला । पहिला/पहिला भातको माड निकालेर त्यसलाई तरकारीमा हाल्ने चलन थियो । हामीले पकाउने भात आधा पाकिसकेपछि तयार हुने बाक्लो तरल पदार्थलाई भातको माड भनिन्छ । भातको माडले अनुहारमा लेप लगाउदा अनुहार सफा र चम्किलो देखिन्छ । […]
काठमाडौं । ‘भि’याग्राले ‘से’क्स पा’वर ब’ढाउने दा’बी गरिन्छ । यसको से’वनले यौ’न दू’र्वलताको अन्त्य गर्ने विश्वास गरिन्छ । ‘यौ’न दू’र्वलता भएकाहरुलाई यसको सेवन हीनताबोधको अन्त्य गराउँछ । भियाग्रााको सेवनले ‘यौ’नां’गमा हुने रक्तप्रवाहले यसलाई उत्तेजित अवस्थामा राखिराख्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। ‘यौ’ने’च्छा जाग्छ, तब पुरुषको ‘यौ’नांगमा रगत प्रवाह गर्ने धमनी खुल्ला हुन्छ भने रगत फ’र्काएर लाने […]
बलेवा, ३१ वैशाख: बागलुङको बडिगाड गाउँपालिका–४ मा एकैघरका तीन जनाको कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको छ । उनीहरूको एक हप्ताभित्रै मृत्यु भएको हो । बडिगाड–४ को जलजलामा दुई हप्ताअघि विवाहभोज खाएकाहरू नै सङ्क्रमित भएका थिए । मृत्यु हुनेमा पनि विवाहभोजमा गएका नै रहेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार मृत्यु हुनेमा एकै घरका ८७ वर्षीय […]
अमेरिकाको लोमा लिन्डा युनिभर्सिटी तथा फ्रान्सको नेसनल दा ला रिसर्च अग्रोनोमिकका शोधकर्ताहरूले ८१ हजार जनामाथि एक अनुसन्धान गरे । उक्त अनसन्धानले देखाए अनुसार मासुबाट भन्दा ड्राइ फ्रुट्स तथा बीउबिजनबाट प्राप्त हुने प्रोटिन मुटुका लागि स्वस्थकर हुन्छ । मासुबाट प्राप्त हुने प्रोटिनले मुटुरोगको खतरा बढाउँछ । जसले मासुजन्य प्रोटिन बढी उपभोग गर्छन् उनीहरूलाई मुटुरोगको खतरा ६० […]
जवानी मै कपाल झर्ने समस्या धेरैको टाउको दुखाइको बिषय बनिरहेको हुन्छ । धेरैले मँहगो स्याम्पु र उपचार गरिरहेका हुन्छन् । तर हामीले घरेलु बिधिबाट नै यो समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । हामी घरेलु उपचार गरेर आफ्नो कपाललाई सुन्दर बनाउन सक्छौं र यो धेरै कालो र चमकदार हुनेछ। मेथी साँच्चिकै अद्धभुत मसला हो जसले हाम्रो खानालाई […]
सूर्यको किरणमा भिटामिन डी हुँदैन। जब घामको नरम किरणहरू हाम्रो छालामा पर्दछन्, हाम्रो छालाले भिटामिन डी बनाउँछ। यो सूर्योदय देखि १ घण्टा (जाडो मौसममा २ घण्टा सम्म) र सूर्यास्त हुनुभन्दा १ घण्टा पहिले हाम्रो छालामा गर्नुपर्छ। मेरो आफ्नै अनुभव छ कि व्यायाम गरेर (पसिना) प्रत्येक दिन ३० मिनेटको लागी, भिटामिन डी पनि बनेको छ। चिकित्सा […]
यदि तपाईं हप्तामा दुईदेखि तीन पटक काचो लसुन खान्नुहुन्छ भने यो तपाईंको स्वास्थ्यको लागि अत्यधिक लाभदायक साबित हुनेछ। काचो लसुनका धेरै फाइदाहरू छन् यसको सेवन गर्दा शरीरमा कोलेस्ट्रॉलको मात्रा बढ्छ। क्यान्सर जस्ता रोग लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ। मधुमेह जस्ता रोगहरू देखा पर्दैन। वडाध्यक्ष र सचिवद्वारा आत्मसर्मपण झुट्टा विवरण पेश गरेर नाबालक परिचयपत्र बनाउन खोज्नेलाई सघाएको […]
यौ न भन्नसाथ नेपाली समाजमा मानिस ‘लजाउने’ गर्दछन् र यस बिषयलाइ नकारात्मक रूपमा लिने गरिन्छ । हाम्रो समाजमा यसलाइ खुला रूपमा लिने गरेको पाइदैन । तर यसलाई सहज रुपमा लिन आवश्यक छ । शा रीरिक स म्पर्क महिला पुरुषबिच गो-प्य तर प्राकृतीक प्रकृया हो। तर धेरै मानिस यसबारे जानकारी लिन वा चर्चा गर्न ‘लजाउने’ गर्दछन् […]